Watch Nay Inzara | Actor | iflix
Nay Inzara | Actor
Chit Mi LoNaw always dreams to becomeaselection athletic player for SEA Games and she try so hard.But unfortunately, car accident makes her paralyzed from the waist down. And also, her boyfriend breaks up with her and doesn’t even come to hospital. Naw feels depression and stops connection with her friends. But when she meets with Khung, she changesalot and try to recover.
Ko Ko Sone Htout GyeeA lawer who can’t givealandlord money. Khine Mar Mar Khat who lose house by the liars. When these person meet, will their problem are going to be ok?
Ma Chit Tat Thu Chinအကြင်နာနဲ့ ခယောင်းတို့ဟာ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ခယောင်းတို့မိသားစုက ငွေရေးကြေးရေးမပြည့်စုံတဲ့အတွက် အမြဲတမ်း အကြင်နာက ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ အကြင်နာက ချစ်သူရှိနေရဲ့သားနဲ့ နေသီဟဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ ထပ်တွဲပါတယ်။ ခယောင်းက အကြင်နာကိုခင်တဲ့အတွက် အကြင်နာပြောသမျှအားလုံးကို ကူညီပေးရှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြင်နာရဲ့လက်ရှိရည်းစားက အကြောင်းစုံသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ အကြင်နာကို ကားတင်ပြေးပါတော့တယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း နေသီဟ ကအကြင်နာနဲ့လက်ထက်ဖို့လူကြီးတွေကိုပြောပြီးသွားပါပြီ။ သိက္ခာကျမှာဆိုးတဲ့အတွက် အကြင်နာရဲ့နေရာမှာ ခယောင်းကိုအစားဝင်ပြီး ဟန်ဆောင်လက်ထက်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိ်ုက်ပါတယ်။ ကဲ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာပါလိမ့်။